Tu Tu Tha: အဲဒီတခါပဲ စွံဖူးတာ
Thursday, June 04, 2009 | Labels: အမှတ်တရ |
This entry was posted on Thursday, June 04, 2009 and is filed under အမှတ်တရ . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ရပ်သွားတာတုန်း။ ဆက်ရေးလေ။
အဲဒီတခါပဲ စွံဖူးတာဆိုလို့ စွံပုံစွံနည်းလေး ပြည့်စုံအောင် ရေးမှပေါ့။ :)
ညီမတူး စာရေးကောင်းလွန်းလို့ ကျောင်းကြီးကို အရမ်းလွမ်းသွားပြီ။ ပထမနှစ်မှာ စွံလိုက်ပုံများ အတန်း အ၀မှာ အမြဲ လူစည်နေတာပဲနော်။ အမတို့တုန်းက EC က တစ်ခန်းထဲ၊ မ်ိန်းကလေး စုစုပေါင်းမှ သုံးယောက်တည်း။
တချို့ စာသင်ချိန်တွေဆို ယောင်္ကျားလေးတွေချည်းပဲ ရှိတဲ့ EP နဲ့ ရောသင်ရတယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် အတန်း နောက်ကျမှ ၀င်လာရင် ဆရာက စာသင်တာ ခဏ ရပ်ထားရတယ်။ တစ်ခန်းလုံး အဲဒီ ကောင်မလေးကိုပဲ ၀ိုင်းကြည့်နေကြလို့။
ဆရာမ ဒေါ်တိုးတိုးသန်း ကတော့ ကျောင်းပြီးမှ ရောက်လာတာ။ ကျောင်းဝန်းထဲမှာပဲ နေကြတော့ သူနဲ့လည်း အိမ်နီးနားချင်းပေါ့။ ဆက်ရေးပါဦး
:D ကောင်း ................................
မစန္ဒာရဲ့ “ဂျီဟောသူ”ကို အမှတ်ရသွားတယ်
အမပို့စ်ဖတ်ပြီးသွားတော့မှ ကျွန်တော့်ပထမနှစ်ကျောင်းသား ဘ၀ကိုပါသတိရလာတယ် မေဂျာ။မိုင်နာဆောင်ခွဲပြီးတက်ရတာ လုံးဝမသိတော့ အင်း ဒီတက္ကသိုလ်က သင်္ချာတွေ၊မြန်မာစာတွေပဲသင်ပြီး ပန်းချီလည်းမသင်သေးဘူး ပထမနှစ်ဆိုတော့မသင်သေးဘူးထင်ပြီး ပြန်ပြန်သွားတာ ဟားဟား အော်နယ်ကတက်လာတဲ့ ကောင်အလေးမို့ပါ